News by The Times of India Newspaper - Latest News 5.3.9.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.3.9.1 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား News by The Times of India Newspaper - Latest News
News by The Times of India Newspaper - Latest News ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အိန္ဒိယ app ရဲ့တရားဝင် Times သတင်းစာကသင်သည်နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂလိပ် သတင်း ဆောင်တတ်၏, ကိုချိုးဖောက်သတင်း အလယ်ပိုင်း & ပြည်နယ်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, ဘောလီးဝုဒ်သတင်း & ဓါတ်ပုံများကနေတိုက်ရိုက်သတင်းသတိပေးချက်များ, ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်, စီးပွားရေး ခရီးသွား, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပညာရေး & စီးတီး သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ အိန္ဒိယကနေ & ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းသွားလာရင်း။ တိုက်ရိုက်တီဗီ စောင့်ကြည့်ဖို့သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင် TOI သတင်း app ကို Download, ကမ္ဘာအနှံ့ကနေဓါတ်ပုံ & ဗီဒီယိုများအတွက်သတင်း - အချိန်မရွေး, နေရာမရွေး,
TOI APP ကို ​​ ၏အင်္ဂါရပ်များ
• အကျဉ်း - အလျင်သတင်းကိုဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်တိုတောင်းတဲ့ခြင်းနှင့်ပြတ်သား format နဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်သွားလာရင်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်အတူ updated နေဖို့
• နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းအပ်ဒိတ်များ - updates တွေကိုမနက်တိုင်း & ညဦးယံအချိန်ကိုရယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတ် updates များကိုအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူတစ်နေ့တာ၏နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း & အဖြစ်အပျက်ပေါ်တက်ကိုဖမ်း
• တိုက်ရိုက်တီဗီ - စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဖြစ်ပျက်အဖြစ်! အသံနှင့်အတူ Times ကအခုတော့ ET Now နှင့်မှန်ဘီလူးတိုက်ရိုက်တီဗီပေါ်မှာရှိသမျှကိုချိုးဖောက်သတင်းများ, စီးပွားရေးနှင့်ဘောလီးဝုဒ်သတင်းများ၏တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံကိုဖမ်း
• နောက်ဆုံး, လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းနှင့် Breaking News, - အိန္ဒိယကနေ & ကမ္ဘာတဝှမ်းသတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများယိ & Breaking, နောက်ဆုံးပေါ်ရယူပါ။
• ကိုအော့ဖ်လိုင်းစာဖတ်ခြင်း - ထိုအော့ဖ်လိုင်းစာဖတ်ခြင်းအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းပင်အင်တာနက်မလိုပဲအော့ဖ်လိုင်း mode မှာဖတ်သတင်းများ, ။
• Bookmark ဆောင်းပါးများ - အခုတော့ bookmark ကိုဆောင်းပါးများကို & သတင်းပုံပြင်များထို bookmark အင်္ဂါရပ်မှတဆင့် & ကာလ၌နောက်ပိုင်းတွင်အမှတ်မှာဖတ်ပါ။
• Customize အသိပေးချက်များ - သင်ကယခုသင့်အကြောင်းကြားစာများ၏အချိန် & ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန် & လည်းသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကိုလကျခံနိုငျပါသညျ!
• ည Mode ကိုစာဖတ်ခြင်း - တော့ဘူးသင်၏မျက်စိအလေးပေးမထားပါနဲ့! ပင်ဆင်းရဲသောသူကိုအလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်သာယာသောစာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့ app ထဲမှာတည်ဆောက် Black နဲ့နီညိုရောင် themes များအသုံးပြုပါ။
• Fonts - အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီနှင့်သင့် app ကိုအတှေ့အကွုံပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့စာလုံးအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ
• Next ကို အဘို့ပွတ်ဆွဲ - ပွတ်ဆွဲချောမွေ့စွာနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြန်ဆန်စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အ left & ညာဘက်!
• Save ကိုဒေတာများ - သင်ချင်တဲ့အခါမှသာပုံရိပ်တွေ download လုပ်ပါ။ သင်နှစ်သက်တဲ့ကွန်ယက်ကိုဆက်တင်များ (Wi-Fi 2G, 3G, 4G) အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကို Download
• ဝေမျှမယ် - ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လိုပဲ? သင်၏မိတ်ဆွေများ & Facebook, Twitter Whatsapp, အီးမေးလ် & ပိုပြီးသုံးပြီးချစ်ရသူနှင့်အတူမျှဝေပေးပါ!
TOI APP ကို ​​ များ၏တချို့ရဲ့နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များ
ခြိုးဖောကျသတင်းများ, နောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, ပုံပြင်များယိနှင့်အားကစား၏ In-depth ကိုလွှမ်းခြုံ, ပုရစ်, ဖျော်ဖြေရေး, စီးပွားရေး, နည်းပညာ, နိုင်ငံရေး & ပိုပြီး - •အိန္ဒိယ၏ Times ကသတင်း app ကိုတစ်ဦး avid သတင်းစာဖတ်သူရှာဖွေနေကြောင်းအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းအသက်ရှင်နေထိုင်!
•အိန္ဒိယသတင်းမှသည်ကမ္ဘာကြီးသတင်းများ, ပုရစ်သတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများ, နည်းပညာသတင်းမှဘောလီးဝုဒ်သတင်းနှင့်ဘောလီးဝုဒ်, ဟောလိဝုဒ်နှင့်ဒေသတွင်းဇာတ်ကားရုပ်ရှင်သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည် - အနုပညာရှင်သတင်းအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံရ
•နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများ Narendra Modi နှင့်ဆက်စပ်သော, ခရစ်ကက်သတင်း, တိုက်ရိုက်ရမှတ်ကတ် ရွေးကောက်ပွဲ & ကျွန်တော်တို့ရဲ့ neighbors- ပါကစ္စတန်, နီပေါနှင့်ဆက်စပ်သောပုံပြင်များ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရယူလိုက်ပါ
•ထို့အတူဓာတ်ပုံကိုဘောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေ၏ပန်းချီပြခန်း, စက်မှုလုပ်ငန်း, နိုင်ငံရေးသမားများ, အားကစားလူတစ် & ဖြစ်ရပ်များ / မြို့ဟောပြောပွဲဖြစ်ကြောင်းပါတီများ, စာမျက်နှာမဂ္ဂဇင်းများ3ပါတီများရှုမြင်ကြသည်။
•သတင်း, ဖျော်ဖြေရေး, အားကစား, ပုရစ်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, စီးပွားရေး, နည်းပညာ၏ကမ္ဘာမှ Daily သတင်းစာကဗီဒီယို updates များကို; အိန္ဒိယကနေ & ကမ္ဘာတစ်လွှား
•အထူးအပိုင်းပြည်ပမှာအိန္ဒိယ & ထံမှသတင်းများအတွက် TOI app ကိုဖတ်နေပျော်မွေ့သောသူသည်ကမ္ဘာ့အနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NRI အသုံးပြုသူများအတွက်နေသူများကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယ app ၏ Times ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သတင်း App ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပြည်ပမှာအိန္ဒိယ & အတွက်သန်း 27 ကျော်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ကမ္ဘာ၏ထက်ပိုမို 225 နိုင်ငံများမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူအ TOI app ကိုအပေါ်သတင်းကိုဖတ်ပါ။ TOI အင်ဒီးယန်း & NRI ရဲ့ရောနှောအိန္ဒိယ & ကမ္ဘာကြီးသတင်း၏ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
, စိတ်ကူးများကိုသင်၏တန်ဖိုးရှိသောတုံ့ပြန်ချက် share ပေးပါ။ သင် app ကို အသုံးပြု. ပျော်မွေ့လြှငျ, ကို5ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးဘူး!
News by The Times of India Newspaper - Latest News အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
News by The Times of India Newspaper - Latest News အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.03k 7.38M
News by The Times of India Newspaper - Latest News ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
News Republic - Aktuelle und angesagte Nachrichten
ေနာက္ထပ္ သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း News by The Times of India Newspaper - Latest News အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.3.9.1
အသုံးပြုရန် ကိုက်ညီမှု Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
ထုတ်လုပ်သူ Times Newspapers Limited
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://m.timesofindia.com/androidprivacypolicy.cms
Release date: 2019-06-07 18:03:23
လက်မှတ် SHA1: A7:4A:52:49:CB:0F:58:C9:06:53:AD:9B:EE:F5:7F:3D:7D:F2:10:1B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Times Internet Limited
အဖွဲ့အစည်း (O): TOI
News by The Times of India Newspaper - Latest News APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ